MIEV misubishi electric car 2010model. အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
MIEV misubishi electric car 2010model.
ရောင်းချသူ: Ei Theingi Aung
Contact 09 30676936 မူလပိုင်ရှင်ရောင်းမည် ကားအတွက်အာမခံပါသည် ကျွမ်းကျင်သူဖြင့်စစ်ဆေးဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အမည်: MIEV misubishi electric car 2010model.